‘छ्या भिनाजु के गर्नुभएको यस्तो ? म निथ्रुक्कै भिजिसकेकी छु’ – aajnepal
HomeRochak‘छ्या भिनाजु के गर्नुभएको यस्तो ? म निथ्रुक्कै भिजिसकेकी छु’
‘छ्या भिनाजु के गर्नुभएको यस्तो ? म निथ्रुक्कै भिजिसकेकी छु’
हैन लोग्ने मान्छेको जात पनि कस्तो हुँदो र’ छ ? तरुनी हेर्दै मख्ख पर्ने । तरुनी भनेपछि धन देख्दा महादेवको तीन नेत्र भनेजस्तै हुन्छ । मन पनि कस्तो हो कुन्नि बाटो हिँड्दा होस् कि कुनै यात्रामा होस्, यी मर्दहरू केवल तरुनीकै चक्करमा हुन्छन् । काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर । हैन, घरमा स्वास्नी नहुनेले त यताउता आँखा लगायो, लगायो, स्वास्नी हुनेले चाहिँ के खोजेका हुन् कुन्नि ?’ सावित्री घरमा एक्लै हुँदा सधैजसो यस्तै सोच्न थालेकी छे ।
अस्मितासँगको सामीप्यता र हिमचिम । उनीहरू खुब मिल्न थालेका थिए । अस्मिता यहाँ बेलाबेला आइरहन्थी । सावित्रीलाई सघाउँथी । कहिलेकाहीँ भने सावित्रीले नभ्याएको बेला कुमोदलाई चिया अस्मिता आफैले पुर्‍याउँथी । सावित्रीलाई बितेका ती पलहरूको एकएक गरी सम्झना हुन थाल्यो । यतिबेला आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हानेजस्तो लाग्यो उसलाई । धेरैजसो आफैले अस्मितालाई घर बोलाउँथी र अस्मिता उसलाई सघाउँथी । राम्रो पनि मानेकी थिई । तर यसरी आफ्नै भाग खोस्ली भनेर कहिल्यै सोचेकी थिइन । सावित्रीले उसमाथि कहिल्यै शंका पनि त गरेकी थिइन । भारी भएको मनमा ठूलो चोट परेको थियो । ऊ आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगी । आँसुका धारा बगाउँदै भनी, ‘थुक्क, साली । नकचरी †’ अनि घोप्टो परेर क्वाँक्वाँ रुन थाली
उनी रुमालले जीउ छोपेर बेडतिर गइन र कम्बल भित्र पसिन।